Secondii 1tti maal gochuu dandeessa? - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
By Alifu Haji	Creativity, Lifestyle November 23, 2018
Gochaan ati secondii tokko keessatti raawwachuu dandeessu jireenyatti gammadaa taatee akka jiraattu si godha. Eeyyen, secondiin tokko qofti. Hin amannee dubbii kana kana? Mee ta’eewwan armaan gadii kanneen tokko tokkoon haa ilaalluu.
1. Seeqadhu baayee
Karaa salphaan jireenya gammachuu qabu jiraachu feetaa? Akkas taanaan baayee seeqadhu. Seequun miirri fooyyee qabu akka sitti dhagahamu godha. Wanti wayii yoo si aarse, cinqe taate, seeqadhu ykn kolfii bira darbi.
2. Qasa’ii kolfi
Haasawuma keenya keessatti “kolfi umrii dheeressa ” jennaa haasofna. Eeyye, Dhuguma. Iddoo barbaadetti akka garaa keetti qasaatee kolfuu hin saalfatin. Kolfuun gammadaa akka taatu si godha waan taheef.
3. Haafura dheeraa baafadhu
Hafuura dheeraa baafachuun cinqiin akka sirraa hir’atu godha. Yeroo guddaas sitti hin fudhatu, karaa salphaa taheen cinqii gara garaa ofirraa hir’isuun. Secondima tokkoo – soddomaati. Raawwadhu kaa!
4. Moobayila kee cufuu
Addunyaa teeknoolojii gara garaan badhaate keessa jiraataa jirra amma. Moobaayila, taabileetii, koompiitara fi kanneen biroo hedduun mana hunda keenyaa jiru. Teeknolojiilee kanneen oomishtummaaf yoo itti gargaaramne baayee bu’a qabeessa taana. Garuu immoo teeknoolojii kun nu sakaallaan jireenyaaf hamaadha. Kanaafuu mee moobayila keenya secondii takka keessatti cufuudhaan, hojii keenyaaf, maatii, hiriyaa fi hawaasa nu maddii jiruuf yeroo keenya haa kenninuu.
Eeyye, galata namaaf kennuu. Waanuma tahe irratti galata namaaf galchuun jireenya gammadaa akka jiraattu si godha. Namaa fi rabbi birattis jaalatamta.
6. Qaama kee diddiriirsi
Secondii tokko qofa. Maashaalee qaama keetii diddiriirsuudhaan madaala qaama keetii kan eeggachu dandeessu. Kana malettis cinqama gara garaa akka sirraa hir’atus godha.
Walumaagalatti, jireenya keenya keessatti gocha secondii takka keessatti raawwannuun jireenya midhaagaa hawaasa biratti jaalatamu jiraachuu dandeenya. Secondii takka qofa. Wantoota ajaa’iba heddu raawwachuu dandeenya. Secondii takka sirnaan itti haa fayyadamnuu!